TOTEN – Tagged "USD" – ICT.com.mm
Toten PDU-C-13A 6-Way Input Plug Rack Mount Type (Black)K98,422
Toten GS-E Server Cabinet 42U GSE-81042 (Black)K1,878,812
Toten GS Network Cabinet 32U GSE-6832 (Black)K1,091,503
Toten GS-E Server Cabinet 27U GSE-61027 (Black)K1,306,224
Toten GS Network Cabinet 27U GSE-6827 (Black)K973,410
Toten အမှတ်တံဆိပ် Plug Way (၆)ခုပါ PDU Input Plug (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ Input ကေဘယ်ကြိုးအရှည် (၃)မီတာအထိ ရှိပြီး 13A အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Rack Mount အမျိုးအစား Universal Input Plug ဖြစ်ပါတယ်။ Brand: Toten, Product Dimensions:0.9 x 7.9 x...
Front and Back Mesh Door Front and Rear Mounting Channels Side Panels removable 2*Fixed Trays(Shelves) 1*Sliding Tray(Rail Arm Shelf) 4*FANS Installed with4Wheels and Castors Dimenson(W*D*H): 800*1000*2055 mm Full...
Exquisite design with precise dimension and craftsmanship, Toughened glass door with silk-screened flower pattern, vented front door border and rear door , Adjustable feet and heavy duty castors are available...
Installation Ready – includes trays, power strip, ventilation fan tray & cagenuts assembly, Robust main frame construction with multiple bendings, Elegant design with Tempered Glass door, Front glass door with...
Full Vented Top Frame with Rear Cable Entrance,4x 4-inch Top Fan Tray with Guard & Filter (Low Noise),2x Lift Off Type Side Door with Quick Release...
Reliable structure with welded Frameworks, Elegant design with Tempered Glass door, Wide Front Door swing angle over 180 degrees, Easy removable side panels with lock, Hassle-free installation method (Patent), Additional...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 15U SWE-6615 Cabinet (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်းခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့ Lock ပါတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 12U SWE-6612 Cabinet (အပြာ+မီးခိုးမှိုင်းရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 12U SWE-6612 Cabinet (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 12U SWE-6412 Cabinet (အပြာ+မီးခိုးမှိုင်းဖျော့ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 12U SWE-6412 Cabinet (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 9U SWE-6609 Cabinet (အနက်ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 9U SWE-6609 Cabinet (အပြာ+မီးခိုးမှိုင်းဖျော့ရောင်) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ Double Section Swing ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 9U SWE-6409 (မီးခိုးရောင်) Cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့ Lock ပါတဲ့ Side...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 9U SWE-6409 (အနက်ရောင်) Cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့ Lock ပါတဲ့ Side...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 6U SWE-6606 (အနက်ရောင်) Cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့ Lock ပါတဲ့ Side...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 6U SWE-6406 (အနက်ရောင်) Cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Spring Latch ပါတဲ့ Side...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 6U SWM-6606 (အနက်ရောင်) Cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့ Lock ပါတဲ့ Side...
အလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Toten အမှတ်တံဆိပ် Wall Mount Series 6U SWM-6606 (မီးခိုးရောင်) Cabinet ဖြစ်ပါတယ်။ ကျကျနနတည်ဆောက်ထားတဲ့ ဖရိမ်တွေနဲ့အတူ စိတ်ချရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Tempered Glass မှန်သားအသုံးပြု တံခါးကို တပ်ဆင်ထားတဲ့အတွက် ဒီဇိုင်းပိုင်း ခေတ်မီသပ်ရပ်တဲ့ Cabinet တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဖြုတ်လို့ရတဲ့ Lock ပါတဲ့ Side...